Imiba ebumnyama iyaqhubeka nokusasaza izazinzulu
Into ebumnyama yinto engacacanga kakhulu kwindalo yonke. Kuya kuba yingxenye ebalulekileyo ye-cosmos, kodwa ayikwazi ukubona okanye ukuziva. Iyakwazi ukufunyanwa ngeetelesiko okanye ezinye izixhobo. Into ebumnyama iye yajikeleza ukususela ekuqaleni kwendalo yonke kwaye yadlala indima ebalulekileyo ekuveleni kweenkwenkwezi kunye nemithala.
Ngokugqithisileyo, nangona kunjalo, kwakungabonakali ngokwenene ngabafundi beenkwenkwezi kwaze kwaba yilapho beqala ukufundela iindidi zezigulane.
Izinga lokujikeleza kwezimila azizange zenze ingqiqo kubafundi beenkwenkwezi bafunda izinto ezinjalo. Ubunzima obuninzi balufunekayo ukuchaza iirhafu zokujikeleza ababekulinganisa. Oku akunangqiqo, kunikwa ubungakanani bobunzima obubonakalayo kunye negesi engabonwa kwiindidi. Kukho kwakufuneka ibe yinto enye apho.
Inkcazo eninzi kakhulu, kubonakala ngathi, bekufuneka kubekho ubunzima apho ukuze singaboni. Kwaye kwafuneka ukuba kube buninzi - ubuninzi bamaxesha angamahlanu ubukhulu obunokubonwa kwi-galaxy. Ngamanye amazwi, malunga ne-80% "yezinto" kule miqolo yayimnyama. Nga bonwayo.
Ekubeni lo mbandela omtsha awuzange usebenzisane nombane (ie ukukhanya), wawuthiwa ngumnyama . Njengoko izazi zeenkwenkwezi zaqala ukufundela ukusebenzisana kwemithala, zaye zaphawula ukuba iigalaxi ezinamaqela ngokukhethekileyo zaziziphatha ngokungathi kukho ubuninzi obuninzi kwiqela.
Iinkqubo zazisetyenziselwa ukulinganisa ukukhanya kwezinto ezinobunzima-ukuguqa kokukhanya ukusuka kwiimitha zeenyawo ezikude ezijikeleze into enkulu phakathi kwethu kunye nemilambo emibandela - kwaye ifumene ubungakanani obuninzi kule mibutho yamagalaxi.
Kwakungabonakali naliphi na enye indlela.
Iingxaki ngeengcamango zobumnyama
Ngokuqinisekileyo kukho intaba yedatha yokuqwalasela ukuxhasa ubukho bemeko emnyama. Kodwa kukho ezinye idibanisa iinkqubo zamagqabha e-galaxy apho umzekelo womnyama omnyama ungabonakali ukucacisa iimpazamo.
Uvelaphi umnyama omnyama?
Le ngxaki, nayo. Akukho mntu oqinisekileyo ukuba wenziwe njani okanye kuphi. Ayibonakali ifanelekile ngokufanelekileyo kumzekelo wethu oqhelekileyo we-physics ye-particle, kwaye ukujonga nje izinto ezifana nemigodi emnyama kunye nezinye izinto azifaki ezinye zeenkcukacha zenkwenkwezi ezikholisayo. Kwafuneka ukuba kwindalo yonke kwasekuqaleni, kodwa yenziwa njani? Akukho mntu uyaqiniseka ... okwamanje.
Ukuqagela kwethu okugqithiseleyo ngoku ukuba izazi zeenkwenkwezi zikhangelele uhlobo oluthile lobumnyama obubandayo , ngokukodwa i-particle eyaziwa ngokuba yintlukwano enkulu ebuthakathaka (WIMP). Kodwa, awazi ukuba i-particle enjalo iya kwenziwa njani kwindalo, kuphela ukuba kuya kufuneka ibe neepropati ezithile.
Ukuqwalasela Imba Yomnyama
Ukufumana indlela yokufumanisa into ebumnyama yinkqantosi ephakamileyo, inxalenye yokuba izazi zeenkwenkwezi azikwazi ngokwenene ukuba zifuna ntoni. Ngokusekelwe kwimizekelo emihle, izazinzulu ziye zafika ngokuzama ukuqonda into emnyama njengoko idlula emhlabeni.
Kukho ukuvavanywa kwezinto ezingekho , kodwa i-physicists isacacisa oko kwenzekayo. Kunzima ukwenza lo msebenzi kuba iinqununu, ngokucacileyo, azibandakanyi ngokukhanya, yindlela ebalulekileyo esenza ngayo imilinganiselo kwi-physics.
Iingcali zenzululwazi nazo zikhangele ukubhujiswa kwamnyama kwimiqolo emfutshane.
Ezinye iingcamango zemiba emnyama zithi ii-WIMP ziziqhekeza ngokwazo, zichaza ukuba xa zihlangana nezinye iindidi zemihlaba ebumnyama ziguqulela abantu bazo zonke zibe ngamandla alungileyo, ngokukhethekileyo i- gamma rays .
Nangona kunjalo, akucaci ukuba le propati yinyani ngento ebumnyama. Kuyinto engavamile kakhulu ukuzibhubhisa amaqhekeza ukuba abekhona kwendalo. Nangona bayenzayo, uphawu luya kuba buthathaka kakhulu. Kuze kube ngoku, uvavanyo lwe-gamma-ray aluphumelelanga ekufumaneni iisayinithi ezinjalo.
Ngaba Ingxaki Yobunzima?
Kukho intaba yobungqina bokuba umbandela omnyama ngokwenene uhlobo lomcimbi kwindalo yonke. Kodwa kusekho ininzi enzululwazi abazi. Impendulo engcono kukuba kubonakala ngathi yinto ethile, yibize into emnyama okanye nayiphi na into, ekhwela ngaphandle apho singasayi kuqwalasela.
Enye into kukuba into ephosakeleyo ngongcamango wethu wendalo . Okokuba, nangona kunokwenzeka, kuya kuba nexesha elinzima ukuchazela yonke into esiyibonayo kwiintsebenziswano zegalaxy. Kuphela ixesha eliza kuxela.
I-Orogeny: Indlela iinjongo zeMountains ngokusebenzisa iSicwangciso seTectonics
I-Chemistry Glassware Amagama kunye nokusetyenziswa
Ubomi be-Guion "Guy" Bluford: NASA Astronaut
Kutheni umlawuli weFBI akakwazi ukukhonza iminyaka engaphezu kwe-10
Imiba Engamangalisa Ngamaqhekeza
I-Cheers, i-Chants ne-Yells
Ukunxulumana noVigo kunye neVirgo
I-Beatles Abbey Road
Izixhobo ezine ezisisiseko ngaphakathi kweInjini